Sahara Bikas Bank(Sahara Bikas Bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
समाचार प्रभाव: साहारा बैंकको सूचिकरण स्थगन, नेप्सेले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाण्डौ । साहारा विकास बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बोनस सेयर सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणमा खेल्न खोजेपछि नेप्सेले स्पष्टीकरण सोध्दै कम्पनीको सूचिकरण स्थगन गरिदिएको छ । बिजशालाले सोमबार साहारा विकास बैंकको फट्याई, उसले नेप्सेमाथि नै लगाएको आरोप र नेप्सेको सो विषयमा स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा २ वटा समाचार प्रकाशन गरेको थियो...
साहाराले लाभांश सूचनामा खेल्यो, ढिलो पठाएर नेप्सेमाथि दोष लगाएको पुष्टि
काठमाण्डौ । साहारा विकास बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सूचना सम्प्रेषणमा खेलेको छ । यो बैंकको पुस २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको थियो । बैंकको संचालक समितिको बैठक बसेको दिन शुक्रबार रहे पनि त्यो दिन समेत बैंकले सूचना सम्प्रेषण गरेन । पुस २१...
साहाराको लाभांश सूचनामा गडबडी, बैंक भन्छ–‘नेप्सेले ढिलो गरिदियो’
काठमाण्डौ । साहारा विकास बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सूचना सम्प्रेषणमा गडबडी भएको छ । यो बैंकको पुस २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको थियो । बैंकको संचालक समितिको बैठक बसेको दिन शुक्रबार रहे पनि त्यो दिन समेत बैंकले सूचना सम्प्रेषण गरेन ।...
जेठ ६ बाट साहारा विकास बैकको हकप्रद अाउने, घरमै बसीबसी अावेदन
काठमाडौँ । थामिनसक्नुको हकप्रदको भारी बोकाउन लागेको साहारा विकास बैंकले जेठ ६ गते बाट निष्काशन खुल्ने जानकारी दिएको छ । एक सय कित्ता शेयर बराबर २ सय ५० (१ः२.५०) कित्ता अर्थात् दुइ सय प्रचास प्रतिशतको अनुपातमा जारी हुने हकप्रद असार ९ मा निष्काशन बन्द हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले वैशाख १० गते सेयरधनी किताब बन्द गरेकाले वैशाख ९ गतेसम्म कायम...
हकप्रदको नाममा ठग्नेमाथि कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँदै बोर्ड !
काठमाण्डौ । ‘धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४’ ले सूचिकृत कम्पनीको साधारणसभाले एकपटक हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । तर, आफैंले गरेको व्यवस्थालाई ठाडो चुनौति दिनेहरुलाई कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्डले खुट्टा कमाउन थालेको छ । यस्तै, अटेरीपन देखाएर...
हकप्रदको लोभमा फेरि ठगिए लगानीकर्ता !
काठमाण्डौ । साधारणसभाबाटै हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरेर पछि अनेक बाहानाबाजीमा रद्ध गर्ने र लगानीकर्तालाई ठगी गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो समय एकजिल्ले सर्लाहीस्थित साहारा विकास बैंकले समेत हकप्रदको लोभ देखाएर आफ्नो सेयर मूल्य बढाई एकाएक साधारणसभाबाट समेत पारित भइसकेको २५० प्रतिशत हकप्रद रद्धका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान...
देव विकास बैंकले सहारालाई प्राप्ति गर्ने
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमीटेडले साहारा विकास बैंकलार्ई अक्वायर(प्राप्ति) गर्ने भएको छ । प्राप्ति सम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै बैंकका अधिकारीले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्रमा देवः विकास बैक लि.को तर्पmबाट संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य र सहारा विकास बैंकको तर्पmबाट संचालक समितिका अध्यक्ष...
असोज १४ देखि साहारा विकास बैंकको १५० प्रतिशत हकप्रद
काठमाण्डौ । साहारा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १५० प्रतिशत हकप्रद दिने घोषणा गरेको छ । आगामी असोज १४ गतेबाट यो बैंकका सेयरधनीले घोषित हकप्रदका लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यो विकास बैंकले १४ गतेबाट सुरु भएको हकप्रदका लागि आवेदन भर्न पाउने समय कात्तिक १८ गतेसम्म रहनेछ । साहारा विकास बैंकले १...